Fahalalahàna miteny · Septambra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Fahalalahàna miteny · Septambra, 2010
Tantara mikasika ny Fahalalahàna miteny tamin'ny Septambra, 2010
Tselatra · Amerika Latina21 Septambra 2010
Shili: Noravan'ny polisy ny famelarana ny saina Mapuche nandritra ny faharoanjato taona
Iràna20 Septambra 2010
Venezoela: Governemanta vs. Tambajotra Sosialy, mitohy ny ady.
Amerika Latina20 Septambra 2010
Tamin'ny herinandro lasa, ny Filohan'ny kaomisiona Media ao amin'ny Antenimieram-pirenena, Manuel Villalba, dia nanambara fa rahampitso 21 Septambra, dia hametraka fitoriana tranonkala maromaro eo anoloan'ny mpampanoa lalàna. Mety ho tsaroanao angamba, tsy vao voalohany izao no nisy solontenan'ny governemanta Venezoeliana milaza imasom-bahoaka ny ady ataony amin'ny tambajotra sosialy.
Malezia: Aiza ny Fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety amin'izao fotoana izao?
Azia Atsinanana03 Septambra 2010
Mety hoe iray amin'ireo miroborobo ara-toe-karena haingana indrindra any Asia ny sarin'i Malezia anananao, fa fantatrao ve fa mbola any amin'ny laharana faha3 avy any aoriana (milahatra eo amin'ny toerana faha 131) tamin'ny taona 2009 amin'ny filaharan'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety iraisam-pirenena izy ? Tsy mivoatra mihitsy izany ho an'ireo mponina...